iPhone ma ọ bụ Samung ama, nke na otu onye bụ mma? Ọ bụ ndị dị otú ahụ a siri ike ajụjụ ị na apụghị ịgwa mfe. Samsung smartphone bụ a ibu na Android n'elu ikpo okwu, mgbe iPhone na-agba ọsọ pụrụ iche iOS (E wezụga iPad na iPod aka ụdị). The dị iche iche ekwentị sistem ka ha nwere dị iche iche ọdịdị na atụmatụ, ka naanị ma ha nwere dị iche iche ụdị.
Ke ibuotikọ emi, m na-eche na-agwa gị na-atụnyere n'etiti isi na-ekpo ọkụ ụdị n'etiti iPhone na Samsung smartphone, dị ka iPhone 5s vs Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy s4 vs iPhone 5, Samsung Galaxy S3 vs iPhone 5.
Part 1. iPhone 5s vs Samsung Galaxy S5 Part 2. Samsung Galaxy S4 vs iPhone 5 Part 3. Samsung Galaxy S3 vs iPhone 5 Part 4. Samsung vs iPhone, nke bụ ọkacha mmasị gị otu
Nke ama na-amasị gị ka mma, na-aga n'ihu iPhone 5s ma ọ bụ ndị na-abịa Samsung Galaxy S5? The table n'okpuru na-agwa gị na isi tụnyere n'etiti abụọ smartphones. Ugbu a, na-ahapụ nwere a ngwa ngwa anya ya.
Gray, ọlaọcha na ọlaedo White, nwa, acha anụnụ anụnụ na gold
Apple A7, 64-bit, sọrọ isi, 1.3GHz Snapdragon 801,32-bit, quad isi, 2.5GHz
Nchekwa: 16GB / 32GB / 64GB; Ram: 2GB
Nchekwa: 16GB / 32GB;
N'azụ: 8 megapixels
Front: 2 megapixels N'azụ: 16 megapixels
Obi ọnụego ileba anya
Ọ dịghị Ee
Management ngwá ọrụ
iPhone 5s bụ a smartphone na elu adịchaghị. Ọ na-e site na iji metal ọ na-emetụtakwa mma. E wezụga na, Ọ bụrụ na ndị enyi gị na ezinụlọ na-ejikwa Apple ngwaọrụ, ọ dị mfe n'ihi na ị na-aka na ha site iMessage, Facetime, wdg Ọ bụrụ na ị kpọrọ ihe ihe ndị na-na, iPhone 5s bụ a mma.
Mgbe na-abịa na-emeghe ọdịdị, Samsung S5 karịrị echiche karịrị iPhone 5s a otutu. Samsung S5 awade gị mfe ohere faịlụ management na nyefe. Ọzọkwa, obi ọnụego nyochaa na Samsung S5-ahapụ gị ṅara ntị gị ike na-elekọta mgbe ọ bụla oge. Olee otú adaba ọ bụ!
Ka enweghị echiche banyere nke smartphone dị mma, iPhone 5s ma ọ bụ Samsung S5? Enweta ihe Ama banyere ndị tụnyere n'etiti ha.
Ekwentị gị nkwekọrịta-abịa na njedebe, na-aga ịgbanwe a ekwentị? Samsung Galaxy S4 na iPhone 5 na-ezi nhọrọ maka gị. Kwụsịtụ ma tụgharịa uche n'etiti abụọ smartphones. Echegbula onwe gị, ndị na-esonụ akụkụ tụnyere galaxy s4 na iPhone 5 na-egosi gị ihe dị iche na.
Quad isi Sọrọ ya isi, A6
Nchekwa: 16GB / 64GB; Ram: 1GB
Nchekwa: 16GB / 32GB / 64GB;
N'azụ: 13 megapixels
Front: 2 megapixels N'azụ: 8 megapixels
Ọzọ tụnyere n'etiti Samsung Galaxy S4 na iPhone 5 >>
Samsung Galaxy S3 ma ọ bụ iPhone 5, nke bụ nri otu maka gị? Anya na mbadamba na ị ga-azịza.
White, nwa, red,-acha anụnụ anụnụ na ndị ọzọ White, nwa
Front: 1.9 megapixels N'azụ: 8 megapixels
Get ọzọ Ama banyere tụnyere n'etiti Samsunug Galaxy S3 na iPhone 5 >>
Part 4. Samsung vs iPhone, nke bụ ọkacha mmasị gị otu
Copy ọdịnaya site Samsung ka iPhone
Export ọdịnaya site iPad ka Samsung
> Resource> Samsung> Samsung VS iPhone: nke onye ị na Dị ka mma?